သုံးနှုန်းမှတ်သားအင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရများ (၂၉) - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on July 8, 2014 at 12:50 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ANSWER အဖြေ၊ ဖြေကြားသည်။
၁။ to say something when someone asksaquestion or speaks to you တစ်ယောက်ယောက်က မေးခွန်းမေးလာသည့်အခါ၊ စကားပြောလာသည့်အခါ ပြန်ဖြေ၊ ပြန်ပြောသည်။
answer [VI/T] ဖြေကြားသည်။ ပြန်ဖြေသည်။
Jamie thought carefully before answering.
ဂျေမီသည် အဖြေပြန်မဖြေခင် အလေးအနက်စဉ်းစားသည်။
I said hello to her, but she didn't answer.
ကျွန်တော်သူ့ကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်သူ ဘာမှပြန်မပြောဘူး။
“Why don't you just leave?"
“I'd like to,” " she answered, “but I have nowhere else to go."
“သွားချင်တာပေါ့ရှင်” သူမပြန်ဖြေသည်။ “ ဒါပေမယ့် သွားစရာနေရာမှမရှိဘဲ။”
answeraquestion မေးခွန်းတစ်ခုအားဖြေသည်။
I had to answeralot of questions about what I was doing that morning.
အဲဒီမနက် ဘာလုပ်နေလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေအများကြီးကိုဖြေခဲ့ရတယ်။
answer + that
John answered that he knew nothing about the robbery.
ဂျွန်သည် ဓါးပြတိုက်မှုအတွက် ဘာမျှမသိပါ ဟုဖြေခဲ့သည်။
answer somebody တစ်ယောက်ယောက်ကိုပြန်ဖြေသည်။ ပြန်ပြောသည်။
“she didn't answer to me” သို့မဟုတ် “She didn't answer to my question’. ဟုမပြောပါနှင့်။
“She refused to answer me” သို့မဟုတ် “She didn't answer my question.” ဟုပြောပါ။
Answer [n C] အဖြေ။ တစ်ယောက်ယောက်ကမေးခွန်းမေးသည့်အခါ၊ ပြောသည့်အခါ တုန့်ပြန်သည့်အရာ
I called out her name, but there was no answer.
သူ့အမည်ကိုအော်ခေါ်တယ်။ ဒါပေမယ့် တုံ့ပြန်သံမကြားရ။
Each time I ask him when the work will be done, l getadifferent answer.
အလုပ်ဘယ်တော့ပြီးမလဲဟု သူ့ကိုမေးသည့်အခါတိုင်း အဖြေတစ်မျိုးစီကြားရသည်။
give sb an answer အဖြေပေးသည်။
I should be able to give youadeﬁnite answer tomorrow.
မနက်ဖြန်မှာတော့ အဖြေတိတိကျကျတစ်ခု ပေးနိုင်ကောင်းမှာပါ။
the answer is (that) အဖြေကတော့
Why don’t people complain? The answer is that they are frightened of losing their jobs.
လူတွေဘာကြောင့်မတိုင်ကြသလဲ။ အဖြေကတော့ သူတို့အလုပ်ပြုတ်မှာကြောက်လို့ပါပဲ။
answer + to ဖြေကြားသည်။ တုံ့ပြန်သည်။
ဒါတွေဟာအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဒါတွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားချင်ပါတယ်။
reply [V I/T ] ဖြေသည်။ ပြန်ကြားသည်။ အကြောင်းပြန်သည်။
“I’m so sorry, " he replied.
“အလွန်ဝမ်းနည်းပါသည်” ဟု သူပြန်ကြားခဲ့သည်။
Before she could reply, Grant put the phone down.
reply + that
Lisa replied that she didn’t like playing tennis.
လီဆာသည် တင်းနစ်ကစားခြင်းအားမကြိုက်ကြောင်း ပြန်ကြားခဲ့သည်။
The Senator refused to reply to any more questions.
အထက်လွှတ်တော်အမတ်မင်းသည် နောက်ထပ်မေးခွန်းများထပ်ဖြေရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။
replying - replied - have replied
* “He replied me”. ဟုမပြောပါနဲ့။ “He replied” ဟုသာ object မပါဘဲပြောပါ။
reply [n C] အဖြေ၊ တုံ့ပြန်မှု၊ ပြန်ကြားချက်။
တစ်ဦးတစ်ယောက် မေးလာ ပြောလာသည်ကိုတုံ့ပြန်ချက်။ (အရေးတွင်အဓိကသုံးပါသည်။)
“Yes, I think we should be going,” was her reply.
“ဟုတ်တယ် ကျွန်မတို့သွားသင့်ပြီထင်တယ်။” ကတော့ သူ့အဖြေပင်။
Kathy murmuredareply, but I couldn't hear it.
ကက်သီက မပွင့်တပွင့်ပြန်ပြောသည်။ သို့သော်ကျွန်တော်မကြားရ။
reply toaquestion/request/inquiry/ accusation အမေးတစ်ခု၊ တောင်းဆိုမှုတစ်ခု၊ စုံစမ်းမှုတစ်ခု၊ စွပ်စွဲမှုတစ်ခုကို တုံ့ပြန်သည်။
He turned and left the room, without waiting forareply to his question.
၂။ to answeraletter, invitation, or advertisement စာတစ်စောင်၊ ဖိတ်စာတစ်စောင်၊ ကြော်ငြာတစ်ခုကို ပြန်ဖြေကြားသည်။ တုံ့ပြန်သည်။
write back [phrasal verb ] စာပြန်ရေးသည်။
I wrote back and said that of course they could stay with us.
write back + to
You must write back to Amy and tell her all the news.
I wrote to Franca three weeks ago but she hasn't replied yet.
လွန်ခဲ့သည့်သုံးပတ်က ဖရန်ကာ ထံစာရေးခဲ့ပေမယ့် သူအကြောင်းမပြန်သေးပါ။
reply toaletter/invitation/advertisement
Becky hasn’t replied to our invitation so I assume she isn’t coming.
ဘက်ကီက တို့ရဲ့ဖိတ်စာကိုမတုံ့ပြန်သေးဘူး။ ဒါကြောင့် သူမလာတော့ဘူးလို့ထင်တယ်။
If you want to reply to this ad, write to the above address.
reply - replied - have replied - replying
* ‘replyaletter’, 'reply an advertisement’ စသည်ဖြင့်မပြောပါနှင့်။
‘reply toaletter/ advertisement’ ဟု to ထည့်ပြောပါ။
reply [n C] စာ/ဖိတ်စာ/ကြော်ငြာ တစ်ခုအားအကြောင်းပြန်သည့် စာ
Any customer who complains to the bank will receiveareply within 48 hours.
ဘဏ်သို့မကြေနပ်ချက်တိုင်တန်းသူ မည်သည့်စားသုံးသူမဆို ၄၈ နာရီအတွင်း အကြောင်းပြန်စာ ရရှိပါလိမ့်မည်။
reply + to
We got overahundred replies to our advertisement.
ကြော်ငြာအား အကြောင်းပြန်ချက်တစ်ရာကျော် ရထားသည်။
answer [v T] စာ/ကြော်ငြာတစ်ခုကို ပြန်လည်ရေးသားဖြေကြားသည်။
answeraletter or advertisement သည် ၄င်းအားရေးသားသူထံ စာရေးအကြောင်းပြန်ခြင်းဖြစ်သည်။
Paola got the job by answering an ad in the paper.
ပေါ်လာသည် ကြော်ငြာတစ်ခုအား စာရေးလျှောက်ထားခြင်းဖြင့် အလုပ်ရသွားသည်။
* ’answer toaletter’, ‘answer to an advertisement’ ဟုမသုံးပါနှင့်။
answeraletter/advertisement ဟုသာ to မပါဘဲ သုံးပါ။
ဗြိတိသျှကောင်စီ (ရန်ကုန်) တွင် သြဂုတ်လတွင်ဖွင့်မည့် Effective Presentation Skills workshop နှင့် CVs, Letters of Application and Interviews workshop များအတွက်စာရင်းပေးနိုင်ပြီ
Presentation ထိရောက်စွာပြုလုပ်နည်းစနစ်များ သင်တန်း (Effective Presentation Skills Workshop)
Presentation တစ်ခုတွင် ပါဝင်ရမည့် အဆင့်များကို ပိုမိုနားလည်လာမည်။
Presentation တက်ရောက်သည့် ပရိသတ်အပေါ်မူတည်၍ လိုအပ်သလို ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်မည်။
ရုပ်ပုံ၊ ဓာတ်ပုံစသည်တို့မည်သို့ထိထိရောက်ရောက် အသုံးပြုရမည်၊ အသံနှင့်ကိုယ်အမူအရာကိုမည်သို့ ထိထိရောက်ရောက်သုံးရမည် ကိုပိုမိုသိရှိလာမည်။
ဗြိတိသျှကောင်စီမှ ပေးသော သင်တန်းပြီးဆုံးကြောင်း လက်မှတ်ရရှိမည်။
စနေနေ့တွင်သာ သင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ရုံး/ကျောင်း အချိန်များလွတ်သည်။
သင်တန်းကြေး - ကျပ် ၁၂၀,၀၀၀ (ကျပ် ၂၀,၀၀၀ တန်ဖိုးရှိသော ဗြိတိသျှကောင်စီစာကြည့်တိုက်တွင် တစ်နှစ် အသင်းဝင်ခွင့်ပါ ပါပြီး )
သင်တန်းချိန် - စနေနေ့ နံနက် ၉ နာရီ မှ ညနေ ၃ နာရီခွဲ အတွင်း တွင်ဖြစ်မည် [ တရက် ၆ နာရီ x ၃ ရက် (၂ ရက်၊၉ ရက် နှင့် ၁၆ ရက် သြဂုတ်လ) = စုစုပေါင်း ၁၈ နာရီ ]
CV နှင့် လျှောက်လွှာရေးသားနည်း၊ လူတွေ့အင်တာဗျူးဖြေဆိုနည်းသင်တန်း (CVs, Letters of Applications and Interviews Workshop)
အလုပ်ခေါ်စာများနှင့် job description များကိုသေချာစွာဖတ်ရှုနားလည်စေမည်
စည်းရုံးဆွဲဆောင်မှုရှိ၍ နည်းစနစ်ကျနသော CV နှင့် လျှောက်လွှာများရေးတတ်စေမည်
သင်၏အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသည်ကို အလုပ်ခေါ်သူမှဖတ်ရှုသည့်အခါ မည်သို့နားလည်ခံစားရမည်ကို သဘောပေါက်စေမည်။
နောင်တွင်ပြန်လည်ကိုးကားနိုင်မည့် အလုပ်ရှာနေသူများအတွက်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းမှတ်တမ်းများပါ ပေးမည်ဖြစ်သည်။ အလုပ်ရှာနေသူများ၊ အလုပ်လျှောက်မည့်သူများ အားလုံးအတွက် လက်တွေ့အသုံးဝင်သည်။
သင်တန်းကြေး - ကျပ် ၈၀,၀၀၀ (ကျပ် ၂၀,၀၀၀ တန်ဖိုးရှိသော ဗြိတိသျှကောင်စီစာကြည့်တိုက်တွင် တစ်နှစ် အသင်းဝင်ခွင့်ပါ ပါပြီး )
သင်တန်းချိန် - စနေနေ့ နံနက် ၉ နာရီ မှ ညနေ ၃ နာရီခွဲ အတွင်း တွင်ဖြစ်မည် [ တရက် ၆ နာရီ x ၃ ရက် (၂၃ ရက် နှင့် ၃၀ ရက် သြဂုတ်လ) = စုစုပေါင်း ၁၂ နာရီ ]
သင်တန်းများတက်ရောက်ရန် ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ (Placement test) ဖြေရန်လိုပါသည်။ အထူးကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်မလိုပါ။ ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကြေး မှာ တစ်သောင်းကျပ်ဖြစ်ပြီး မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြား (သို့မဟုတ်) သန်းခေါင်စာရင်း/မွေးစာရင်း မူရင်းများယူဆောင်၍ ဇူလိုင်လ (၁၈) ရက် နံနက် (၈:၃ဝ) မှ (၁၀:ဝဝ) အတွင်း ၇၈၊ ကမ်းနားလမ်း ဗြိတိသျှကောင်စီတွင် လာရောက်ဖြေဆိုရပါမည်။
ဝင်ခွင့်ဖြေဆိုရန်စာရင်းပေးသွင်းခြင်းကို ဇူလိုင်လ (၁၈) ရက်မတိုင်မှီတွင် ဦးရာလူစနစ်ဖြင့်လက်ခံမည်ဖြစ်၍ အမြန်စာရင်းပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
တစ်တန်းတွင်သင်တန်းသား အများဆုံး ၁၆ ဦးသာလက်ခံမည်ဖြစ်သောကြောင့် ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ (Placement test) ဖြေဆိုရန် နေရာရယူရန်အတွက်စာရင်းပေးရန် ဤ call back form - http://tinyurl.com/bc-call-back-form - အားဖြည့်ပါ (သို့) ဖုံး ၂၅၆၂၉၀၊ ၂၅၆၂၉၁၊ ၂၅၄၆၅၈ တို့သို့ အမြန်ဆက်သွယ်ပါ။ Call back form ဖြည့်ပါက British Council မှဖုံးပြန်ဆက်ပေးပါမည်။ enquiries@mm.britishcouncil.org သို့ အီးမေးလ်ပို့၍ဖြစ်စေ www.facebook.com/BritishCouncilMyanmar မှ message ပေးပို့၍ဖြစ်စေလည်းအချိန်မရွေး စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Permalink Reply by Aye Myint Tun on July 9, 2014 at 17:45